प्रश्न: तपाइँको साइकल - BikeHike लाई मेस अप गर्ने योजना B बनाउँछ
प्रश्न: योजना B ले तपाइँको साइकल गडबड गर्नेछ
योजना B ले तपाईंको चक्रलाई कति लामो समयसम्म बर्बाद गर्छ?
के चक्की पछिको बिहानले तपाईको चक्रलाई महिनौंसम्म बिगार्न सक्छ?
के तपाइँ प्लान बी लिएर दोस्रो अवधि पाउन सक्नुहुन्छ?
के प्लान बी ले तपाइँको ovulation परिवर्तन गर्छ?
प्लान बी असफल हुन सक्छ?
के चक्की पछि बिहानले तपाईंको महिनावारी २ महिना पछि असर गर्छ?
प्लान बी लिएर गर्भपात हुन सक्छ?
मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि म ओभुलेशन गरिरहेको छु?
Ovulation को लक्षण के हो?
म कसरी भनूँ जब म ovulating छु?
प्लान बी लिएपछि कोही गर्भवती भएको छ?
के बिहानको चक्कीले काम गर्छ यदि ऊ तपाई भित्र आयो?
के प्लान बी ले तपाईंको बच्चालाई असर गर्छ?
यदि तपाईं पहिले नै गर्भवती हुनुहुन्छ भने प्लान बी हानिकारक छ?
के प्लान बी ले तपाईंलाई सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण दिन सक्छ?
पहिलो हप्तामा गर्भावस्था को संकेत के हो?
तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको घरमा प्रजनन छ?
यदि तपाइँ ovulating हुनुहुन्न भने तपाइँ गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ?
मैले ओभ्युलेसन गरिरहेको छैन भने कसरी थाहा पाउने?
तपाईंले ओभ्युलेसन हुनुभन्दा कति दिन अघि गर्भधारण गर्नुभयो?
Levonorgestrel गर्भनिरोधक चक्कीहरूमा पाइन्छ, तर प्लान बी ले तपाईंको शरीरको प्राकृतिक हर्मोन स्तरहरू परिवर्तन गर्न सक्ने उच्च खुराक समावेश गर्दछ। अतिरिक्त हर्मोनले मासिक धर्म चक्रलाई असर गर्न सक्छ, जसको कारण पहिले वा ढिलो अवधिको साथै भारी वा हल्का रक्तस्राव हुन्छ।
प्लान बी जस्ता आकस्मिक गर्भनिरोधकहरूबाट हुने अधिकांश परिवर्तनहरू एक महिनावारीभन्दा बाहिर रहँदैनन्। यदि तपाईंले प्लान बी लिइसकेपछि तपाईंको महिनावारी एक हप्ता ढिलो भयो भने, तपाईं गर्भवती हुन सक्ने सम्भावना छ, त्यसैले गर्भावस्था परीक्षण गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्।
प्लान बी (जसलाई आपतकालीन गर्भनिरोधक पनि भनिन्छ, वा बिहान पछिको चक्की पनि भनिन्छ) ले अस्थायी रूपमा कसैको मासिक धर्म चक्र परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यसैले तपाइँको प्रेमिकाको अवधि कम्तिमा एक महिनाको लागि फरक हुन सक्छ। बिहान-पछी चक्की जति पटक आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने बारे कुनै हानिकारक वा खतरनाक छैन।
केहि अनियमित रक्तस्राव - जसलाई स्पटिङ पनि भनिन्छ - तपाईले बिहान पछि चक्की खाए पछि हुन सक्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक (EC) लिएपछि महिनावारी हुनु भनेको तपाईं गर्भवती नभएको संकेत हो। तपाईंको महिनावारी भारी वा हल्का, वा EC लिएपछि सामान्य भन्दा पहिले वा ढिलो हुनु पनि सामान्य छ।
उत्पादनको लेबल अनुसार, प्लान बी ले ओभ्युलेसनलाई रोक्छ वा ढिलाइ गर्छ, वा अण्डा निस्कन सक्छ। अण्डा र शुक्रकीटको संयोजन हुँदा यसले निषेचनलाई पनि रोक्न सक्छ।
एक-खुराको आपातकालीन गर्भनिरोधक चक्कीहरूले लगभग 50-100% समय गर्भावस्थालाई रोक्छ। आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीहरू असफल हुन सक्ने केही कारणहरूमा ओभुलेशन समय, BMI र औषधि अन्तरक्रियाहरू समावेश छन्।
"चक्की पछिको बिहानले तपाइँको अर्को महिनावारी ढिलो गर्न सक्छ तर सधैं त्यसो गर्दैन। तपाईंको अर्को महिनावारी चाँडै पनि हुन सक्छ," जुलिया भन्छिन्, "यद्यपि, यदि तपाईंको महिनावारी सात दिन भन्दा बढी ढिलो भयो भने, तपाईंले गर्भावस्था परीक्षण गर्नुपर्छ।"
यदि तपाईं पहिले नै गर्भवती हुनुहुन्छ भने प्लान बी ले गर्भपात गराउन सक्दैन वा तपाईंलाई चोट पुर्याउन सक्दैन। यदि तपाईंले प्लान बी लिएको3हप्ता भित्र कुनै पनि योनिबाट रक्तस्राव हुनुहुन्न भने, अपोइन्टमेन्टको लागि 685-2470 मा स्वास्थ्य केन्द्रमा फोन गर्नुहोस्।
तपाईंको मासिक धर्म चक्रको लम्बाइ - सामान्यतया तपाईंको महिनावारी सुरु हुनुभन्दा लगभग 10 देखि 16 दिन अगाडि ओभ्युलेसन हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग नियमित चक्र छ भने तपाईंले ओभ्युलेसन हुने सम्भावना हुँदा काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको पाठेघरको श्लेष्म - तपाईले ओभुलेशनको समयको वरिपरि भिजेको, स्पष्ट र बढी चिप्लो बलगम देख्न सक्नुहुन्छ।
Ovulation को लक्षण एक Ovulation परीक्षण मा सकारात्मक परिणाम। उर्वर ग्रीवा बलगम। बढेको यौन इच्छा। बेसल शरीरको तापक्रम वृद्धि। ग्रीवाको स्थितिमा परिवर्तन। स्तन कोमलता। लार फर्निङ पैटर्न। Ovulation दुखाइ।
ओभ्युलेसनका लक्षणहरू आधारभूत शरीरको तापक्रममा वृद्धि हुन्छ, सामान्यतया १/२ देखि १ डिग्री, थर्मोमिटरद्वारा नापिन्छ। ल्युटेनाइजिङ हार्मोन (LH) को उच्च स्तर, घरको ओभ्युलेसन किटमा मापन गरिन्छ। पाठेघरको श्लेष्म, वा योनि स्राव, काँचो अण्डाको सेतो जस्तै स्पष्ट, पातलो र तानिएको देखिन सक्छ। स्तन कोमलता। फुल्ने।
अनुमानित ०.६ देखि २.६% महिलाहरू जसले असुरक्षित यौनसम्पर्क पछि बिहान-आफ्टर पिल खान्छन अझै पनि गर्भवती हुनेछन्। रिफाइनरी२९ लेखकले आकस्मिक गर्भनिरोधक औषधि लिँदा पनि गर्भवती भएको उनको कथा साझा गरेपछि बिहानको चक्कीको बारेमा मानिसहरूलाई के थाहा छ र थाहा छैन।
हो यो अझै काम गर्नेछ। धेरैजसो अनुसन्धानले प्लान बी प्रयोग गर्दा पाठेघरको अस्तर (एन्डोमेट्रियम) मा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भन्ने कुरा बताउँछ। होइन - आकस्मिक गर्भनिरोधक (उर्फ बिहान पछिको चक्की) ले असुरक्षित यौनसम्पर्क पछि गर्भावस्था रोक्न मद्दत गर्न सक्छ, पहिले होइन।
प्लान बी ले विकासशील भ्रूणलाई हानी गर्दैन। यदि गर्भावस्थाको समयमा गल्तीले प्लान बी लिइयो भने, यसले विकासशील भ्रूणलाई हानि गर्दैन। प्लान बी को प्रयोगले महिलाको भविष्यमा गर्भवती हुने क्षमतालाई असर गर्दैन। महिलाहरूले आपतकालीन अवस्थामा घरमै चक्कीहरू राख्न सक्छन्।
प्लान बी एक गर्भनिरोधक चक्की हो, जसको अर्थ यसले गर्भावस्थालाई रोक्छ। यदि तपाईं पहिले नै गर्भवती हुनुहुन्छ भने, चक्कीले काम गर्दैन। औषधिले "अवस्थित गर्भावस्थामा बाधा वा असर गर्दैन," टेभाका अनुसार।
प्लान बी एक आपतकालीन गर्भनिरोधक हो, र सम्भावित गर्भाधान भएको ७२ घण्टा भित्र लिनुपर्छ। यसले तपाईंको गर्भावस्था परीक्षणको नतिजालाई असर गर्दैन। गर्भधारणको ७२ घन्टा पछि गर्भावस्था परीक्षणहरू सही नभएकाले प्लान बीले हस्तक्षेप गर्दैन।
गर्भावस्था 1 हप्तामा वाकवाकी वा वाकवाकी बिना लक्षण। कोमलता, सुन्निने, वा झनझन महसुस, वा ध्यान दिने नीलो नसहरू सहित स्तन परिवर्तनहरू। बारम्बार पिसाब। टाउको दुखाइ। बेसल शरीरको तापमान बढ्यो। पेट फुल्नु वा ग्यास हुनु। हल्का पेल्भिक क्र्याम्पिंग वा रगत नबनाई असुविधा। थकान वा थकान।
धेरै जसो घरमा FSH परीक्षणहरू घरमा प्रशासित गर्भावस्था परीक्षणहरूसँग मिल्दोजुल्दो छन्। सजिलो परीक्षणको लागि, दिनको पहिलो पिसाबबाट पिसाब सङ्कलन गर्न सानो कप प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि परीक्षण स्टिकलाई पिसाबको नमूनामा डुबाउनुहोस् र परीक्षणको नतिजा दर्ता हुँदा समतल सतहमा राख्नुहोस्।
यदि तपाईंले डिम्बाशयको5दिन अघि देखि ovulation पछि 1 दिन सम्म असुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्नुभयो भने तपाईं गर्भवती हुन सक्नुहुन्छ। यदि शुक्राणु निषेचन गर्न को लागी कुनै अण्डा नभएको कारण यदि तपाइँ अण्डाकार हुनुहुन्न भने तपाइँ गर्भवती हुन सक्नुहुन्न। जब तपाईंसँग ओभुलेशन बिना महिनावारी चक्र हुन्छ, यसलाई एनोभ्युलेटरी चक्र भनिन्छ।
बाँझोपनको मुख्य लक्षण भनेको गर्भधारण गर्न नसक्नु हो । मासिक धर्म चक्र जुन धेरै लामो (३५ दिन वा बढी), धेरै छोटो (२१ दिन भन्दा कम), अनियमित वा अनुपस्थित हुनुको अर्थ तपाईं ओभ्युलेसन हुनुहुन्न भन्ने हुन सक्छ।
गर्भावस्था प्राविधिक रूपमा मात्र सम्भव छ यदि तपाइँ ovulation को पाँच दिन अघि वा ovulation को दिन मा यौन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। तर सबैभन्दा प्रजनन दिनहरू तीन दिनहरू हुन् जुन ओभुलेशन सम्मको नेतृत्व गर्दछ र समावेश गर्दछ। यस अवधिमा यौनसम्पर्क गर्नाले तपाईलाई गर्भवती हुने उत्तम मौका दिन्छ।
द्रुत उत्तर: मेरो साइकलसँग बी मेसको योजना बनाउन सक्छ
के प्लान बीले तपाईंको महिनावारी चक्रलाई बिगार्छ
द्रुत उत्तर: के प्लान बी पिल मेस अप साइकल
द्रुत उत्तर: योजना बी मेस अप अवधि चक्र बनाउन सक्छ
तपाइँको साइकल संग B मेस योजना गर्न सक्नुहुन्छ
योजना B मेस अप मेरो साइकल
द्रुत उत्तर: मेरो पीरियड साइकललाई गडबड गर्ने योजना B बनाउन सक्छ
योजना B तपाईंको अर्को चक्र गडबड गर्न सक्छ
प्रश्न: के प्लान बी ले तपाईको मासिक धर्म चक्रलाई गडबड गर्यो
प्रश्न: प्लान बी मेस अप साइकल कति लामो हुन्छ
प्रश्न: प्लान बी ले तपाईको महिनावारी चक्रलाई गडबड गर्न सक्छ
द्रुत उत्तर: तपाईंको अवधि चक्रको साथ बी मेसको योजना बनाउन सक्छ
रातभर जागै बस्दा मेरो निद्रा चक्र रिसेट हुनेछ
प्रश्न: दौडले मेरो साइकल चलाउन मद्दत गर्नेछ
प्रश्न: टेस्टोस्टेरोनको एक चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउँछ
स्टेरोइडको एक चक्रले तपाईंलाई चोट पुर्याउँछ
स्टेरोइडको एक चक्रले केहि गर्छ?
के मेरो खुट्टा साइकलबाट ठूलो हुनेछ?
मेरो Fitbit ट्र्याक साइकल चलाउनेछ